बस्ती – Himalaya Television
नगर सरकारको बस्तीमा जानै मान्दैनन् मुसहर समुदाय ! (भिडियो रिपोर्टसहित)
२४ पुस २०७८ इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाले निर्माण गरेको वस्तीमा मुसहर समुदायले जान अस्वीकार गरेका छन् । दैनिक ज्यालादारी गर्नेका लागि उक्त बस्ती भएको स्थान उपयुक्त नभएको उनीहरुको गुनासो छ । तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत दुई वर्ष अघि निर्माण...
२० पुस २०७८ जलेश्वर । महोत्तरी जिल्लाको एकडारा गाउँपालिका–४ भटौलिया गाउँका हुकुमा सदा आफ्ना लालाबाला र घरपरिवारसहित चिसो स्याँठका बीच हुनुहुन्छ । उहाँ तथा बालबालिका र महिलाहरूको शरीरमा चिसो छल्न सक्ने लुगाफाटा छैनन् । उहाँको घरमाथि टुटेका झिक्राझिक्री मात्र...
रोकिएन बस्तीमा जङ्गली हात्तीको आतङ्क
२४ मंसिर २०७८ झापा । झापाको कमल गाउँपालिका–५ स्थित सिम्लेमा केही दिनयता दिनहुँजसो जङ्गली हात्तीले आतङ्क मच्चाउँदै आएको छ । बस्तीसँगैको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको जङ्गल क्षेत्रबाट निस्कने जङ्गली हात्तीले आतङ्क मच्चाउँदै आएपछि त्यहाँका बासिन्दा त्रसित हुन पुगेका छन् ।...
२२ असोज २०७८ बलेवा । कहिले कालिगण्डकी किनारमा माछाको खोजी त कहिले मजदूरीका लागि भौँतारिने गुमा माझीले आज आफ्नै आँगनमा बाख्राको पाठी प्राप्त गर्नुभयो । माझी पोशाकमा सजिएकी उनीको पोशाक र अनुहारमा चमक थियो । गण्डकी प्रदेश पर्यटन, उद्योग,...
यसरी पग्लँदै हिमाली बस्ती
९ भदौ २०७८ गण्डकी । दुई महिनाअघि हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको नीलगिरि हिमाल आसपासको बस्तीमा भीषण वर्षा भयो । नीलगिरि हिमालका फेदीका बस्तीहरू लुप्रा, मार्फा, जोमसोम, छैरु, ठिनी, स्याङलगायतका गाउँमा वर्षाले ठूलै असर ग-यो । सामान्यतः पानी नै नपर्ने र...
राउटे बस्तीमा एक महिनामै तीन जनाको मृत्यु
२६ साउन २०७८ कर्णाली । कर्णालीका जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे बस्तीका तीन जनाको मृत्यु भएको छ । यसै महिनामा उनीहरुको मृत्यु भएको हो । एक हप्ताको फरकमा २८ वर्षीय मानसिंह र ३१ वर्षीय दलबहादुर शाहीको मृत्यु भएको सल्यान...
१८ साउन २०७८ सिन्धुपाल्चोक । गत असार १ गते आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा ९० र मेलम्चीमा ८६ घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । पाँच जनाको मृत्यु भयो भने अझै २० जना बेपत्ता छन् । शनिबारदेखि मेलम्चीमा पुनः बाढी आएको छ...
बस्ती बचाउन भन्दै कांग्रेस कार्यकर्ता तटबन्ध बनाउन अग्रसर (भिडियो रिपोर्टसहित)
१६ असार २०७८ बुटवल । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र उसको भातृ संगठन नेपाल दरुण दलका नेता तथा कार्यकर्ता तिनाउ नदीमा तटबन्धन बनाउन जुटेका छन् । नदीबाट उच्च जोखिममा रहेका बस्ती बचाउन भन्दै कांग्रेस कार्यकर्ता तटबन्धन बनाउन अग्रसर...
गाउँ-गाउँमा दोहन : गुल्मीमा उत्खनन हुँदा बस्ती र खेत जोखिममा ! (भिडियो रिपोर्टसहित)
२९ जेठ २०७८ गुल्मी। शहर बजारमा मात्रै होइन गाउँगाउँमा पनि नदी र खोलामा दोहन भइरहेको छ । गुल्मीका अधिकांश खोलामा मापदण्ड विपरीत स्काभेटरसहितका ठुला यन्त्र प्रयोग गर्दै दोहन हुँदै आएको छ । इस्मा गाउँपालिकामा अहिले छल्दी खोलाबाट पनि अवैध...